Umenzi wempahla nomthengisi Ngexesha
Ukuhanjiswa ngenqwelomoya ovela eTshayina- Amaxabiso oMoya oMkhulu wamazwe ngaMazwe Cinga kunye ubuDlelwane ligama elisetyenziswe kakhulu, kodwa liyahamba ngokuchaza iinkonzo zethu ezijolise kubathengi. Si ...
Uloyiko lomoya Ukuhambisa ngenqanawe Ukusuka e-China-amaNqanaba oMoya oMkhulu waMazwe ngamaZwe
Ubambiswano ligama elisetyenzisiweyo, kodwa lihamba ngendlela ethile yokuchaza iinkonzo zethu ezijolise kubathengi. Sizama ukuzisa okuninzi ngakumbi kubudlelwane kunokuba yindlela nje yokufikelela kubathengi bakho kwihlabathi liphela.
Ngamazwe imithwaloukugqithisa kuhlala kusisenzo sokulinganisa phakathi kwexesha, indleko kunye neenkxalabo zokusingqongileyo. Eso sesinye sezizathu zokuba iinkampani zikhethe ixesha lokuphumla le-GZ ngeendleko ezifanelekileyo, ukuhanjiswa okuthe tye kwemithwalo yazo. Njengabo, unokuqiniseka ukuba izivumelwano esizisebenzisayo kwihlabathi liphela zikunika ubhetyebhetye bokukhetha kuluhlu lomoya nolwandleimithwaloIinketho zenkonzo. Ngaphandle komthungo kulungiselelwe iimfuno zakho ezichanekileyo, gqibezela ngokubonakala kokuphela kokuphela.
Sinikezela ngeenkonzo zothutho ngomoya ukusuka e-China ukuya kulo naliphi na elinye ilizwe, okanye sinokukunceda ungenise e-China. Ukuthuthwa kwomoya oya eYurophu, umzekelo, ukulibaziseka kokuhambisa imithwalo yomoya ukuya kwiintsuku ezisi-7, okukhawulezayo kunesiqhelo iintsuku ezingama-35/40 ngolwandle.
Uthungelwano lwethu lwamaqabane avavanywe kakuhle asivumela ukuba silawule ukuthunyelwa kwakho ngokuncinci nangolona lubambezelo.
Ukuthuthwa kwomoya kunokwenzeka kulo lonke uhlobo lweemveliso, ukusukela kwezona zibuthathaka ukuya kwezona zinzima.
Imimiselo yomoya ingqongqo kakhulu, yiyo loo nto sibeka lonke ingqalelo ekuqwalaseleni ngokugqibeleleyo izicelo zakho. Emva kolu hlalutyo luchanekileyo lweemfuno zakho, amaqela ethu aya kukuqinisekisa ngeenkonzo zothutho ezihambelana ngokupheleleyo nolindelo lwakho, iimfuno zakho kunye nohlobo lwempahla yakho.
Ukuthunyelwa komoya kumazwe aphesheya kunokuba yinkqubo enzima, kunye nolawulo, imigaqo kunye nokufumana amaxabiso oqoqosho kunye nendlela yokulwa. Siyayiqonda indlela ekunokuba noxinzelelo ngayo oku, ke masenze lula eyakhoAmalungiselelo yeyakho.
Iqela lethu elinamava kakhulu linokunceda kuwo onke amacandelo enkqubo yokuhambisa. Ke ngoko, awunakuphakuzela njengoko siqinisekisa ngenkonzo ethembekileyo nengabinangxaki kwaphela.
Xa usikhetha, nokuba ufuna ngaphezulu kokujikeleza iinkonzo zomoya, siya kuhamba ngaphezulu nangaphaya ukuze senze ngokwezifiso unikezelo olululo. Senza yonke into nokwenza yonke into yakhoezothutho amava ukuhlangabezana nokulindelweyo.
1.Isikhululo senqwelomoya kwisikhululo seenqwelomoya, umnyango ngomnyango, umnyango kwisikhululo seenqwelomoya, isikhululo sendiza ukuya emnyango
2.I-DDP (Umsebenzi oHlawulwayo wokuHanjiswa), iDDU (ukuHanjiswa koXanduva)
4. Ezweni ezothutho amalungiselelo
7. ukupakisha Safe kunye crating
Ixesha lokuphuma le-GZ liya kuhlala liqhayisa ukukunikezela ngamava ethu ekuthumeleni phakathi kwe China kwihlabathi kwiimfuno zakho kuThutho loMoya.
Egqithileyo Imithwalo yoLwandle
Imithwalo yomoya ye-DDP
Ukuhanjiswa komoya kwi-DDP